gbasaa na-ebute na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi SeedInvest - NAB Gosi News site na Mgbasa Mgbasa. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB gosiri LIVE
Home » Apụta » gbakwunye na ịkwado Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi SeedInvest
Boston dabeere gbasie ike bụ na akụkọ ọzọ. Ụlọ ọrụ ahụ na-asụ ụzọ, na-aga n'ihu na-ekwupụta mkpa dị oke mkpa iji chọpụta ngwa ngwa vidiyo na ọrụ nlekọta maka ndị ọrụ nta na nke nta, kwupụtara otu izu gara aga, nkedo nke axle na GearTM, usoro agwakọta nke na-ejikọta ike Apple Mac mini ike iji nweta axle ai sitere na nyocha, njikwa mgbasa ozi AI-ike, arụ ọrụ na transcode software. eleba anya na Gear jikọtara ntinye aka na nchịkọta na-achọpụta na nchịkọta na nchọta ya na arụmọrụ na -emepụta ihe na ngwaọrụ ndị na-agbanwegharị maka mgbatị na ngwa ngwa.
Taa, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na ọ na-ebido ego SeedInvest, nhazi isi ahia nke ndi mmadu. Ebe ahụ na-ebi ndụ taa www.seedinvest.com/axle.ai/seed. SeedInvest na-enye onye ọ bụla investors ohere ịnweta ngwa ngwa ike ohere ohere. SeedInvest akwalitewo 150 mmalite ma na-ama ọkwa netwọk ngwa ngwa nke ndị investors 200,000. SeedInvest enweela ihe mmalite 25,000 na-ebuli elu ebe ọ bụ na ọ nakweere 1% nke ụlọ ọrụ ndị ahụ na-apụta n'elu ikpo okwu.
Site na ntụgharị nke JOBS (Business Jumpstart Our Business Startups) na 2012, ma ndị nwere ego na ndị na-akwadoghị nwere ike itinye ego na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. SeedInvest na-eme ka nke a nwee ike ime omume na ụlọ ọrụ ahụ, bụ nke nọ na-eto eto ruo oge ụfọdụ, na-anabata ọpụpụ n'èzí site na ikpo okwu.
achọpụtala ihe omimi vidiyo na nchịkwa ngwanrọ maka ụlọ ọrụ 500 n'ụwa nile, site na mgbasa ozi mgbasa ozi dịka Turner, CBS na Paramount, na ụlọ ọrụ ndị dịka REI, Reebok, Coca-Cola na Ahịa Waterhouse Coopers. Akụrụngwa, ịkwalite ọganihu ọhụrụ na ọgụgụ isi na ngwa igwe, na-enye ndị ahịa aka ịkọ, ịchọ, jikwaa ma jikọta ya na mgbasa ozi ha n'ụzọ dị mgbagwoju anya ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ. Dika ihe di iche iche nke vidio na-aga n'ihu n'uwa dum dika okwu di nkpa di mkpa, ihe ngwangwa software nke axle na-enye ndi ozo nwere ihe di n'ime ngwa ngwa na ngwa ngwa iji nye aka ijikwa usoro ihe omimi ha.
Sam Bogoch, onye isi ochichi si n'aka ya, siri, "anyi achowo na eto eto ngwa ngwa site na nmalite anyi n'ihi n 'azu ndi mmadu na - achikota ihe omuma ihe omuma anyi." Gaa n'ihu Bogoch, "anyi achota SeedInvest ka anyi buru ezigbo onye ọrụ ego ma na-enwe obi ụtọ ịnakwere ndị na-etinye ego na ha na-abụ akụkụ nke ụlọ ọrụ anyị na-eto eto. "
Senior Editor at Broadcast Naa Magazine
Curtis Chan bụ President na CEO / malitere na Managing Onye Mmekọ nke abụọ elu technology Brand Marketing na Public Relations ụlọ ọrụ, Chan & Associates na akpịrị mmetụta, onye ahịa mbio na Global Fortune 500 ka anwa anwa isi obodo kwụrụ ụgwọ startups.
Ya ụlọ ọrụ 'ọrụ, n'ihi na ihe karịrị iri afọ abụọ, nyeere garner n'oge ogbo na ibu na ụlọ ọrụ ndị dị ịrịba ama ika ikpughe, n'ihi na ma nnweta ma ọ bụ IPO, na a ngụkọta ekwu ọnụ ahịa nke n'elu $ 2.0 Ijeri.
Mr. Chan bụ a Oghere Usoro entrepreneur, philanthropist, na-ede akwụkwọ na angel ọṅụ. Ọ na-egwuri isi Executive ọrụ n'oge na-enyere na-eweta ma digital ọdịyo na digital video teknụzụ maka ndekọ, na agbasa ozi n'ikuku na biputere mmepụta ọrụ. Ya irutụrụ ndabere jikọrọ abụọ abụọ n'elu iri afọ atọ na-ebi-amụba Executive ọrụ na arụmọrụ, azụmahịa mmepe, engineering na ahịa / ahịa na ọmụma technology, media & ntụrụndụ, nchekwa na ịkparịta ụka n'Ịntanet, na ndị ọzọ yiri elu technology ọrụ. Ọ bụ ifịk abara ma agadi-enye Ndụmọdụ ọtụtụ guzosie ike na-amalite na-elu ụlọ ọrụ, a ahịa / technology nyocha, na a nwere ihe karịrị iri afọ abụọ nke ahụmahụ na-ika mmepe, management ize / ụlọ ọrụ turnarounds, ihe mgbasa ozi na mmekọrịta ọhaneze.
Onye gụsịrị akwụkwọ na California Polytechnic State University, San Luis Obispo, Mr. Chan na-eme ememe 12th ya dịka onye otu n'ime ụlọ ọrụ Fullerton College Foundation, afọ 16th dịka Onye Nlekọta Ụlọ na Onye Nduzi maka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Small Business na California State University Fullerton na incubators. Ọzọkwa, ọ bụ onye ọrụ afọ ofufo nke DECA (Delta Epsilon Chi na Distributive Education Clubs of America); onye na-enye ndụmọdụ na College of Engineering's Global Waste Research Institute, onye nkụzi nke incubator, Cal Poly, San Luis Obispo na onye so na Green na Gold Society. N'ihe banyere nlekọta nlekọta ụlọ ọgwụ, ọ bụ onye isi oche nke Board maka Association Healing Hearts; ma na-ekwu okwu mgbe nile n'ọtụtụ MBA na ọkwa nkuzi nke doctorate gburugburu mba ahụ. O gosipụtara na bipụtara akwụkwọ 30 n'ụwa nile, bụ akwụkwọ co-onye edemede, onye na-ede akwụkwọ akụkọ maka Society of Motion Picture and Television Engineers, Onye isi edemede maka mgbasa ozi Broadcast Beat Magazine, bụ Senior Editor for Computer Computer Review, na bụ mgbe niile Edere Onye Ntinye Aka na akwukwo ahia nke United States na nke mba di iche iche karia 30.
Ele akpịrị Mmetụta ọrụ na www.cognitiveimpact.com. Curtis nwere ike ruru na curtis@cognitiveimpact.com; Office: (714) 447-4993 ma ọ bụ curtis@broadcastbeat.com.
Ọhụrụ posts site Curtis Chan (-ahụ ihe niile)
gbakwunye na ịkwado Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi SeedInvest - November 8, 2018
KHQ-TV Supercharges Digital Video na Ejiri, Bitcentral's Linear on Demand Streaming Solution - October 17, 2018
AES Ihe omume pụrụ iche nke New York na-eweta aha ndị kasị ukwuu na Audio maka Ajụjụ Ọnụ na Ihe Omume - October 15, 2018
Previous: Ihe Ntanetị Ogwu Red Iji megharịa mkparịta ụka na onye na-ese ihe nkiri Sandra Valde-Hansen Na 2018 Camerimage
Osote: EKWERE NKE GARRETT NA-EKWU NDỊ AHỤ EKWU NDỊ CAMERA JAPAN
Hey Buddy !, Achọtara m ozi a maka gị: "gbakwunye Mwepụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi SeedInvest". Nke a bụ njikọ weebụsaịtị: https://www.broadcastbeat.com/axle-ai-launches-seedinvest-funding-campaign/. Daalụ.